Case Fanolorana - Shijiazhuang Yiling Hospital
Case laharana voalohany:
Mr Xiao, 67 taona, voalohany indrindra aty kanseran'ny, AFP1000u / ml, kibo CT: goavana aty kanseran'ny, miaraka amin'ny zaridaina endrika, vongana nisy marina ambany vena ny toaka sy ny vavahadin-tserasera fihadiana, sy fananiham-bohitra ny aty capsule amin'ny subcapsular effusion, simba anefa, vavahadin-tserasera fihadiana Nanitatra , cholecystitis, drainage manodidina ny gallbladder, fanampin-javatra iray spleen. Nanome interventional embolization + Shinoa Integrated fanafody sy ny fitsaboana hafa. Effect mazava.
Case laharana faharoa:
Fan Yusuo, lahy, 57, marina kanseran'ny havokavoka, aretina ny squamous cellule voan'ny kansera, ny fivontosana manitsakitsaka ny lalan-dra ny havokavoko, ka very ny vintana ho an'ny fandidiana, radiotherapy koa contraindicated.
Omeo azy Integrated fitsaboana, ampahany amin'ny fitsaboana dia ahitana: fanafody + Interventional + hyperthermia.
Ary fahombiazan'ny tombana CR (feno famelan-keloka), mandraka ankehitriny velona mihoatra ny 3 taona, miaina ara-dalàna.
Wang Moumou, lahy, 54 taona, Shijiazhuang. Izy dia nampidirina hopitaly tamin'ny volana Jolay 2010, noho ny fahafahana mahatsapa tamin'ny faran'ny sy ny fahalemena ho an'ny mihoatra ny iray taona.
Tamin'ny Jolay 2009, ny marary nitaraina noho ny fahafahana mahatsapa ny rantsantongotra rehefa nitsoka ny rivotra-pana ao amin'ny fitarainana, ary tsy ela dia nisy fahafahana mahatsapa amin'ny rantsan-tananao roa, izay tsy sarobidy. Septambra any atsimo amin'ny raharaham-barotra dia, nisy fanaviana, antibiotika fitsaboana tazo indray, tanana-tongotra fahafahana mahatsapa soritr'aretina tsikelikely ny proximal fampandrosoana, ary miaraka amin'ny fahalemena, nitsangantsangana azo ekena, ho any amin'ny faritany hopitaly mba hanamarinana ny karandohany sy ny vozon-tranonjaza taolan'ny hazondamosin'ny tsy -kanavaka, ho any amin'ny hopitaly fiadanana hijery ny hazondamosiko lumbar nampiseho "lumbar 2-3 intraspinal neurofibroma", ary nampiseho myoelectricity "distal hozatra ara-dalàna, ao amin'ny distal hozatra." Tamin'ny volana Novambra, dia lasa izy nankany Tiantan Hospital hanao kozatra tranony resection fivontosana.
Postoperative levitra dia 20 jins, fahafahana mahatsapa any amin'ny faran'ny tsikelikely nitombo, mandeha ny korontana, ara-dalàna manome urine, tsy hahatsiaro tena korontana, ka nisy rano teo amin'ny kohaka, binocular fahitana izany miaraka amin kely marindrano nystagmus, Febroary 2010 amin'ny paritany hopitaly, jereo myoelectricity mampiseho "symmetry , distal maotera axons, myelin fery, vavahadin selam-pitatitra tanteraka simba ", roa tonta ara-dalàna nampahatsiahy tsirim, ara-dalàna brainstem-sofina dia nampahatsiahy mety, madio feo audiometry mampiseho binaural selam-pitatitra Sexual spasm, pathological" mitaiza neuropathy "ny ankavia sural hozatra biopsy, aretina toy ny" Green-Ballie aretin'ny ", Omeo lehibe-levitra Gamma takamoa, mampihena ny hormonina sy mamelona hozatra, hanatsarana hivezivezy fitsaboana, hanafoana ny soritr'aretina ny phlegm, mampihena ny fahafahana mahatsapa amin'ny tongony, sitrana avy levitra, ka mandehana any an-tokotany. Rehefa marary mitsika, ny toe-javatra dia somary miovaova, ny soritr'aretina ny fahafahana mahatsapa amin'ny faran'ny faran'ny mbola mazava, ny fahalemena dia ambany ny lohaliny, ny mandeha dia miovaova, ary efa sarotra ny hitsangana amin'ny maso nikatona na mandeha amin'ny alina, ka tonga tany amin'ny hopitaly ho an'ny fitsaboana.
Taorian'ny 4 herinandro 'fitsaboana ao amin'ny hopitaly: famantarana ny fahafahana mahatsapa any amin'ny faran'ny ny tanany sy ny tongony no kokoa, ary ny flexion ny tongotra dia kilasy faha-4, ary ny mandeha dia tranon'omby. Fanaraha-maso: Hatreto tsy fiverenan'ilay, ara-dalàna ny fiainana sy ny asa. Satria voafetra ny isan'ny toerana, tsy afaka maneho bebe kokoa ny fitsaboana. Raha te-hahafantatra ny fitsaboana manokana ianao, dia afaka hifandray aminay amin'ny alalan'ny mailaka.
Afaka levitra Shinoa fanafody fitsaboana ny any ivelany?
Raha tsorina, ny fanafody tsotra Shinoa hita ao amin'ny firenena rehetra, raha mbola misy Shinoa fivarotana fanafody. Na izany aza, ny paika Shinoa fanafody fitsaboana dia tsy misy any ivelany. Rehefa izy no atao arakaraka ny toe aretina manokana. Ary izany no mahatonga antsika hanontany ny tatitra ara-pahasalamana nandritra ny fifandraisana, ka afaka mandinika ny toe-javatra amin'ny antsipiriany ary avy eo dia manao drafitra fitsaboana.
Inona no asa no manana fanafody Shinoa?
Nandritra ny fitsaboana rehetra, Sinoa milalao fanafody pahasalamana vokatry ny manaraka:
1. Fitoriana lalan-dra manerana ny vatana
2. Mitombo ny ra ho voa sy ny fanatsarana ny ra mivezivezy
3. mahavelona rà sy manala stasis
4. Manome ampy sakafo sy oksizenina ny voa
5. Mitombo ny tena mahasalama fahaizana ny sela simba voa
6. Manamafy Orina Qi, zava-dehibe iray angovo, eo amin'ny tena
7. Hatsarao voa filtration tahan'ny
Ao amin'ny 2 herinandro fitsaboana, Afrikana marary voan'ny diabeta efa nahazo zavatra mitondra Integrated. Ny tehina rehetra dia faly mahita izy dia mahazo tsara.
TCM fitsaboana teknolojia, TCM decoction, fanafody singa dimy fandroana, fanafody ilaina andrefana ....
Angamba Massage Azonao jerena na aiza na aiza, na izany aza, izay ananantsika dia Tuina, izay miasa eo amin'ny taova anatiny, anaty rafitra, tsy fanorana eo amin'ny hoditra, na hozatra; angamba Azonao jerena tsindrona volamena na aiza na aiza, na izany aza, acupoint rehetra, isan-fiolahana rehetra fanjaitra halalin'ny miasa; Angamba ianao afaka mahita fanafody fandroana na aiza na aiza, na izany aza, dia mampiasa singa dimy teorian'ny mba hitari-dalana, mifototra amin'ny tena manokana toetra, ka fanampiana amin'ny marary izy.
Effect afaka miteny.